Love in Disguise ( 2010 ) - Myanmar Asian TV
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကတော့ – ဂီတအနုပညာလောကမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Du Ming Han (Wang Leehom) က ဂီတဖျော်ဖြေပွဲအပြီး အပြန်လမ်းမှာ … Song Xiao Qin ( Liu Yifei ) က Du Ming Han ကားကိုဝင်တိုက်မိပါတယ် …
အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Du Ming Han က Song Xiao Qin နဲ့ ရင်းနှီးဖို့အတွက် အနုပညာတက္ကသိုလ်ကို ရုပ်ဖျက်ပြီးဝင် ခဲ့ပါတယ် … အဲ့အကြောင်းကို Song Xiao Qin သိသွားတဲ့အချိန် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ကြည့်ရှုဖို့ကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော် …
လူငယ် ဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း မိန်းကလေး ပရိသတ်အနေနဲ့ရော ယောက်ျားလေး ပရိသတ်အနေနဲ့ရော အားပေးမှုအများဆုံးရထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Childhood Love လေးဖြစ်တဲ့ ဂူးဂူး ( Liu Yifei ) ရဲ့ ချစ်စဖွယ်အမူအရာလေးတွေကို ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြပါဦးနော် …
Rating အနေနဲ့ကတော့ IMDb မှာ 5.9/10 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ … ဟာသပုံစံဖြစ်တဲ့အပြင် တရုတ်ရှေးဂီတတူရိယာတွေရဲ့သီချင်းသံစဉ်တွေပါနား ထောင်လို့ရတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် …
Translator : Shou Shou
Actors: Chen Han-Dian, Joan Chen, Leehom Wang, Liu Yifei, Qiao Zhenyu, Yike Zeng
Openload.co Myanmar896 MB Download Soliddrive.co Myanmar896 MB Download Openload.co Myanmar378 MB Download Soliddrive.co Myanmar378 MB Download
My Dream Class ( 2018 )
My Dream Class ဒီကားလေးကတော့ Oct 25ရက်​​နေ့ကမှ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ comedy, life အမျိုးအစား​လေးဖြစ်ပြီး​မိနစ် ၃၀ စာ ဇာတ်ကားတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ် အညွှန်းကတော့ *** ဗြောလီကျွန်းကို တာဝန်ကျတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဆရာ ဟန်ဂီထပ်အကြောင်းလေးပေါ့ ကျွန်းဆိုတော့ ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းတော့ မိဘတွေကလည်း ပညာရေး ဘက်မှာ သိပ်အားမပေးကြပဲ မိဘ အလုပ်အကိုင် ကိုပဲ လုပ်ခိုင်းကြတာပေ့ါ…
Genre: Comedy, Life, Uncategorized
ဒီတစ်ခါတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်ကားသစ်လေးကတော့ The Stolen Princess ဆိုတဲ့ 2018ထွက် Ukarine 3D animation ကားသစ်လေးပါ 😉😉😉 ဒီကားလေးက ရုရှကဗျာဆရာကြီး ပူရ်ှကင် ရဲ့ ပုံပြင်ကိုအခြေခံထားတာပါ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ တပ်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ ”ရူစလန်”ဆိုတဲ့နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေရေးသမားလေးတစ်ယောက်…. တစ်ညမှာ လွတ်လပ်မှုကိုမြတ်နိုးပြီးစွန့်စားချင်စိတ်ရှိတဲ့ ဘုရင့်သမီးတော်”မီလာ”နဲ့တွေ့ဆုံမိတယ် ရူစလန်ကတော့မီလာ့ကိုဘုရင့်သမီးတော်မှန်းမသိပါဘူး အဲ့ဒီမှာတိုင်းပြည်ကိုသိမ်းဖို့ကြံနေတဲ့မှာ်ဆရာကြီးကမီလာ့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ မှော်ဆရာကြီးက မီလာ့ကိုဘာလို့ဖမ်းခေါ်သွားတာလဲ??? ဘုရင်ကြီးနဲ့မှော်ဆရာကြီးကကော ရန်ငြိုးရှိလို့လား?? ရူစလန်ကကော မီလာ့ကိုကယ်တင်ပါ့မလားဆိုတာ??…
Trailer: Love in Disguise ( 2010 )